လက်ပန်တောင်းရဲ့ ချက်ကောင်း | ထွေထွေထူးထူး ကိုရွှေထူး
အလေးချိန် ပေါင် ၁၀၀ ၀န်းကျင်၊ ပိန်ပိန်ပါးပါး ကမ္ဘာကျော် အမျိုးသမီးကြီးဟာ တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့ အခက်အခဲကို တတ်နိုင်သလောက် တဦးထဲ ဒိုင်ခံဖြေရှင်းပေးနေတာ တချက်ကလေးမှ မတုန်လှုပ် မတွေဝေသလို ဘယ်သူမှလည်း ကြောက်မနေခဲ့ပါဘူး။
အစိုးရ၊ စစ်တပ်၊ နိုင်ငံရပ်ခြားက ကုမ္ပဏီ၊ ဒေသခံလူထု အစုစု အဖွဲ့၊ အသင်းအပင်းတို့ရဲ့ ယုံကြည်ရာ အားကိုးရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီးပါဝါ အထူးသဖြင့် မြန်မာ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အားကို တဦးထဲ ထင်ပေါ်စွာ နမူနာထုတ် သက်သေခံပြချက်ကတော့ ကြောက်စရာပါ၊ လန့်စရာ၊ ထိတ်စရာပါ။ ဘယ်သူ တဦးတယောက်ကမှ သူ့ကို မယှဉ်နိုင်ပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ ထပ်မံဖြည့်စွက်ချင်ပါတယ်… ကို @Myo Tha Htet ရေ…..။
လက်အောက်ငယ်သား၊ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့ တရုတ်တွေ ငြိုငြင်မှာစိုးလို့ ……….
မိမိကိုယ်တိုင် ရှေ့မှာ မိန့်မိန့်ကြီးထိုင်ပြီး ကမကထလုပ် လက်မှတ်ထိုးစေခဲ့တဲ့ ဒီစာချုပ်ကြီးကို ပြဿနာတွေ တက်တော့မှ ထမင်းရေပူ လျာလွှဲ ကော်မရှင်ဖွဲ့ ဒီအမျိုးသမီးကြီးကို ဥက္ကဌတင်ခိုင်းပြီး ဒေသခံနဲ့ ခေါင်းတည် ရှင်းခိုင်းခဲ့တဲ့ လူက ….. နှလုံးအားကူစက်နဲ့မို့လို့သာ … ပေါ့ဗျာ…။
ကို ဒီမိုဝေယံ စကားကိုလည်း ကြားမိသေးသဗျ..။
၂၀၁၅အတွက် မျက်ဖြူဆိုက်နေသူများအတွက် သွေးထိုးလှုံဆော်ဖို့ ဆရာကြိုက် မဖြစ်ရလေအောင်..
ခေါင်းရှောင်ကြသည်…။ အစိုးရဟူသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များသည် သိက္ခာမရှိစွာပင် ပြည်သူအပေါ်ထားသည့် မေတ္တာနှင့် မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုမရှိ၊ အများပြည်သူ ထောက်ခံမှု မရှိသည့်အတွက်ကြောင့် ကိုယ်လုပ်ထားသည့် အလုပ်ကို တာဝန်မယူ ခေါင်းရှောင်ကြသည်..။ သတ်ကွင်းကို မဖြတ်ဝံ့ ဖြတ်ရန်လည်း နှလုံးရည်၊ လက်ရုံးရည်လည်းမရှိ..။
ယနေ့ ပြောင်းလဲလာသော အခြေအနေ တရပ်ဆိုသည်မှာ မိုးပေါ်က ကျလာသည်မဟုတ်ပေ..။ ယနေ့ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ဆိုသူ တာဝန်မယူရဲသူများ၏ စေတနာ ကောင်းလွန်းသောကြောင့်လည်း မဟုတ်ပေ..။ ဒီအခြေအနေတရပ်ကို ပေါ်ထွန်းလာဖို့ လူထုခေါင်းဆောင် မည်၍ မည်မျှ ကြိုးစားခဲ့ရသည် အနစ်နာခံ စတေးခဲ့ရသည်ကို ပြန်မြင်အောင်ကြည့်သင့်ပေသည်…။ ပြည်သူ့အကျိုးမပါပဲ ဘယ်အရာမှ မလုပ်ဟု အကြိမ်ကြိမ် ကတိပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယနေ့အရေးတွင် ထွက်ပေါ်လာသော အစီရင်ခံစာအရ ဦးပိုင်နှင့် ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီတို့သည် ယခင်ကလို ထင်တိုင်းလုပ်ခွင့် မရတော့ပေ။ ထင်သာမြင်သာ မရှိ လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်ခွင့်မရတော့သည်မှာလည်း အမြတ်ဖြစ်သည်..။ ပတ်ဝန်းကျင်မှ ပြည်သူ့သဘောထားကို အလေးမထား၍ မရတော့သော အခြေအနေသည် အမြတ်ဖြစ်သည်။
This entry was posted in မြန်မာသတင်း, News and tagged ဒီမိုဝေယံ, လက်ပန်တောင်း, လက်ပံတောင်းတောင်, ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်, မြန်မာသတင်း, မြန်မာနောက်ဆုံးသတင်းများ, Burma News, DASSK, Daw Aung San Su Kyi, Myanmar Blogger, Myanmar Recent News on March 14, 2013 by koshwehtoo.
← “သဘာဝအနေအထားအတိုင်း ဖန်တီးထားသင့်သည့် တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်များ” ၀က်မှေးရွာသူ သွဲ့သွဲ့ဝင်း →